Baolina kitra : taona fotsy ny an’ny ligin’Analamanga | NewsMada
Baolina kitra : taona fotsy ny an’ny ligin’Analamanga
Tsy nisy noraisina ny vokatra, teo amin’ny baolina kitra, ho an’ity taona 2017 ity, ho an’ny ligin’Analamanga. Azo lazaina fa taona fotsy satria tsy nisy niangana ireo ekipa niatrika ny fifaninanam-pirenena.
Anisan’ny ligim-paritra lehibe eto Madagasikara, an’Analamanga eo amin’ny taranja baolina kitra. Lehibe amin’ny isan’ireo klioba misy ao aminy sy ny hamaroan’ny mpilalao. Goavana ihany koa, raha ny habetsahan’ny mpilalao mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy. Kely ary tsy mifanahaka amin’ny halehibeny kosa nefa raha ny vokatra eo amin’ny fifaninanam-pirenena no lazaina.
Taona fotsy mihitsy izany, tamin’ity taom-pilalaovana 2017 ity, satria tsy nisy azony ireo fihaonana, na ny ho tompondaka na ny teo amin’ny amboaran’i Madagasikara. Ny fitantanana ny fifaninanana anaty ny tena olana fototra mahatonga izany, raha ny nambaran’ireo tomponandraikitry ny klioba. Be loatra ilay vola tangosin’ny ligin’Analamanga, nefa ny kalitaon’ny fihaonana tsy mandeha amin’izay tokony ho izy. Notsiahivin’ireo mpitantana ekipa eto an-dRenivohitra fa an’Analamanga irery, amin’ireo ligim-paritra manerana ny Nosy, no hany lafo indrindra. «Manenjika isa fotsiny, hahazoana maka ilay saram-pisoratana anarana lafo vidy be”, hoy ny fitarainan’ireo raiamandreny, mitondra klioba.
Mbola nampidirin’ireo filohana seksiona kizo indray mandeha indray amin’ity ireo ekipa marobe eto Analamanga, amin’ny hifidianan’izy ireo indray mandeha indray ny mpitantana ankehitriny. Tsiahivina fa efa ela no tsy nisy ekipan’Analamanga, nanao pao-droa izany, teo amin’ny fifaninanam-pirenena. Ny ho tompondakan’i Madagasikara moa tsy lazaina intsony fa saika mionona, aty amin’ny amboara hatrany Analamanga.